Ukupheliswa kokugqibela kuphelisa njani amashishini | Martech Zone
I-end-to-end analytics ayizizo nje iingxelo ezintle kunye nemizobo. Isakhono sokulandela umkhondo womthengi ngamnye, ukusuka kwindawo yokuqala yokuthintela ukuya kuthengiso oluqhelekileyo, kunokunceda amashishini anciphise iindleko zezitishi zentengiso ezingasebenziyo nezingaphezulu kwexabiso, ukunyusa i-ROI, kunye nokuvavanya ukuba ubukho babo kwi-Intanethi bukuchaphazela njani ukuthengisa ngaphandle kweintanethi. OWOX BI abahlalutyi baqokelele amatyala amahlanu ababonisa ukuba uhlalutyo oluphezulu kunceda amashishini ukuba aphumelele kwaye abe nenzuzo.
Sebenzisa i-End-to-End Analytics ukuvavanya igalelo kwi-Intanethi
Imeko. Inkampani ivule ivenkile ekwi-intanethi kunye neevenkile zentengiso ebonakalayo. Abathengi banokuthenga iimpahla ngqo kwiwebhusayithi yenkampani okanye bajonge kwi-Intanethi kwaye beze kwivenkile ebonakalayo ukuze bathenge. Umnini uthelekise ingeniso kwintengiso ye-Intanethi kunye ne-intanethi kwaye ugqibile ukuba ivenkile ebonakalayo izisa inzuzo eninzi.
Inqaku. Thatha isigqibo sokuba ubuye umva kwintengiso ye-Intanethi kwaye ujolise kwiivenkile ezibonakalayo.
Isisombululo esisebenzayo. Inkampani yeengubo zangaphantsiDarjeeling Ufundile isiphumo se-ROPO-ifuthe lobukho bayo kwi-Intanethi kwintengiso yayo engaxhunyiwe kwi-intanethi. Iingcali zeDarjeeling zigqibe kwelokuba i-40% yabathengi batyelele le ndawo ngaphambi kokuthenga evenkileni. Ngenxa yoko, ngaphandle kwivenkile ekwi-Intanethi, phantse isiqingatha sezinto abazithengileyo ngekhe zenzeke.
Ukufumana olu lwazi, inkampani ixhomekeke kwiinkqubo ezimbini zokuqokelela, ukugcina kunye nokulungisa idatha:
Uhlalutyo lukaGoogle ngolwazi malunga nezenzo zabasebenzisi kwiwebhusayithi
I-CRM yenkampani yeendleko kunye nedatha yokugqitywa kweodolo
Abathengisi baseDarjeeling badibanisa idatha kwezi nkqubo, ezazinezakhiwo ezahlukeneyo kunye nengcinga. Ukwenza ingxelo emanyeneyo, iDarjeeling isebenzise inkqubo yeBI ukulungiselela uhlalutyo lwesiphelo.
Sebenzisa i-End-to-End Analytics ukonyusa imbuyekezo kutyalo mali
Imeko. Ishishini lisebenzisa amajelo entengiso aliqela ukutsala abathengi, kubandakanya ukukhangela, intengiso yeemeko, iinethiwekhi zentlalo kunye nomabonwakude. Zonke ziyahluka ngokwexabiso kunye nokusebenza kwazo.
Inqaku. Kunqande intengiso engasebenziyo nexabisa kakhulu kwaye usebenzise intengiso esebenzayo kunye nexabiso eliphantsi. Oku kunokwenziwa kusetyenziswa i-end-to-end analytics ukuthelekisa indleko kwisitishi ngasinye kunye nexabiso elizisa kulo.
Isisombululo esisebenzayo. KwiUgqirha Ryadom Uluhlu lweeklinikhi zonyango, izigulana zinokunxibelelana noogqirha ngeendlela ezahlukeneyo: kwiwebhusayithi, ngomnxeba, okanye kwindawo yolwamkelo. Izixhobo zohlalutyo lwewebhu eziqhelekileyo bezingonelanga ukumisela ukuba undwendwe ngalunye luvela phi, nangona kunjalo, kuba idatha yayiqokelelwe kwiinkqubo ezahlukeneyo kwaye yayingadibani. Abahlalutyi betyathanga kwafuneka badibanise ezi datha zilandelayo kwinkqubo enye:
Idatha malunga nokuziphatha komsebenzisi kwiGoogle Analytics
Fowunela idatha kwiinkqubo zokulandela umkhondo
Idatha kwiindleko ezivela kuyo yonke imithombo yentengiso
Idatha malunga nezigulana, ukwamkelwa kunye nengeniso evela kwinkqubo yangaphakathi yeklinikhi
Iingxelo ezisekwe kule datha ngokudibeneyo zibonise ukuba zeziphi iindlela ezingahlawulanga. Oku kuncede ikhonkco laseklinikhi lenza inkcitho kwintengiso yabo. Umzekelo, kwintengiso yeemeko, abathengisi bashiye amaphulo kuphela ngeesemantiki ezingcono kwaye bandise uhlahlo-lwabiwo mali lwee geoservices. Ngenxa yoko, uGqirha Ryadom wayinyusa i-ROI yeendlela ezizezinye ngamaxesha e-2.5 kunye nokunciphisa iindleko zentengiso kwisiqingatha.
Sebenzisa i-End-to-End Analytics ukuKhangela iiNdawo o Ukukhula
Imeko. Ngaphambi kokuba uphucule into, kuya kufuneka ufumane ukuba yintoni kanye kanye engasebenzi ngokuchanekileyo. Umzekelo, mhlawumbi inani lamaphulo kunye namabinzana okukhangela kwintengiso yemeko inyuke ngokukhawuleza kangangokuba akusekho lula ukuyilawula ngesandla. Ke uthatha isigqibo sokuzenzekelayo kulawulo lokubhida. Ukwenza oku, kufuneka uqonde ukusebenza kwewaka ngalinye kumabinzana ophando aliwaka. Emva kwayo yonke loo nto, ngovavanyo olungachanekanga, ungadibanisa uhlahlo-lwabiwo mali lwakho okanye utsale abathengi abambalwa abanokubakho.
Inqaku. Vavanya ukusebenza kwegama ngalinye elingumawaka kumawaka emibuzo yokukhangela. Ukuphelisa inkcitho kunye nokufunyanwa okuncinci ngenxa yovavanyo olungelulo.
Isisombululo esisebenzayo. Ukulungiselela ulawulo lwebhidi,Hoff, Umthengisi wehypermarket wefanitshala kunye nezinto zasendlini, uqhagamshele zonke iiseshoni zomsebenzisi. Oku kubancede balanda iminxeba, ukutyelela ezivenkileni, kunye nalo lonke unxibelelwano nesiza kuso nasiphi na isixhobo.
Emva kokudibanisa yonke le datha kunye nokuseta ii-analytics zokugqibela, abasebenzi benkampani baqala ukumilisela ulwabelwano-ukuhanjiswa kwexabiso. Ngokuzenzekelayo, uGoogle Analytics usebenzisa imodeli yokuchofoza ngokungangqalanga. Kodwa oku akuhoyi utyelelo oluthe ngqo, kwaye ijelo lokugqibela kunye neseshoni kuthungelwano lokunxibelelana lifumana ixabiso elipheleleyo loguqulo.
Ukufumana idatha echanekileyo, iingcali zeHoff zisete ukubonwa okusekwe kwifanele. Ixabiso lokuguqula kuyo lisasazwa phakathi kwawo onke amajelo athatha inxaxheba kwinyathelo ngalinye lefaneli. Xa befunda idatha edibeneyo, bavavanya inzuzo kwigama ngalinye eliphambili kwaye babona ukuba azisebenzi kwaye zizise iiodolo ezingaphezulu.
Abahlalutyi beHoff baseta olu lwazi ukuba luhlaziywe yonke imihla kwaye ludluliselwe kwinkqubo yolawulo lokubhida oluzenzekelayo. Iibhidi ziye zilungelelaniswe ukuze ubungakanani bazo bulingane ngokuthe ngqo kwi-ROI yegama elingundoqo. Ngenxa yoko, i-Hoff yonyusa i-ROI yayo yentengiso yomxholo nge-17% kwaye iphindaphindwe inani lamagama aphambili.
Sebenzisa i-End-to-End Analytics ukwenza ubuNxibelelwano buBuntu
Imeko. Ngalo naliphi na ishishini, kubalulekile ukwakha ubudlelwane nabathengi ukwenza izibonelelo ezifanelekileyo kunye nokulandela umkhondo wotshintsho kukunyaniseka kwegama. Ewe kunjalo, xa kukho amawaka abathengi, akunakubakho ukwenza izibonelelo ezenzelwe wena ngamnye kubo. Kodwa ungahlulahlula ngokwamacandelo aliqela kwaye wakhe unxibelelwano nelinye lala macandelo.
Inqaku. Yahlula bonke abathengi kumacandelo aliqela kwaye wakhe unxibelelwano nelinye lala macandelo.
Isisombululo esisebenzayo. ​ButikIvenkile yaseMoscow enevenkile eku-intanethi yeempahla, izihlangu, kunye nezinye izinto, iphucule umsebenzi wabo nabathengi. Ukonyusa ukunyaniseka kwabathengi kunye nexabiso lokuphila, abathengisi bakwaButik babonisa unxibelelwano lomntu ngokusebenzisa iziko lokufowuna, i-imeyile kunye nemiyalezo yeSMS.
Abathengi bahlulwe baba ngamacandelo ngokusekwe kwimisebenzi yabo yokuthenga. Isiphumo sayo sasichithakele idatha kuba abathengi banokuthenga kwi-Intanethi, baodole kwi-intanethi kwaye bathathe iimveliso kwivenkile ebonakalayo, okanye bangasebenzisi sayithi kwaphela. Ngenxa yoku, inxenye yedatha yaqokelelwa yagcinwa kuGoogle Analytics kwaye enye indawo kwinkqubo yeCRM.
Emva koko abathengisi be-Butik bachonga umthengi ngamnye kunye nakho konke ukuthengwa kwabo. Ngokusekwe kolu lwazi, bazimisele ngokwamacandelo afanelekileyo: abathengi abatsha, abathengi abathenga kanye ngekota okanye kanye ngonyaka, abathengi abaqhelekileyo, njl., Bebonke, bachonge amacandelo amathandathu kwaye benza imigaqo yokutshintsha ngokuzenzekelayo ukusuka kwelinye icandelo ukuya kwelinye. Oku kuvumele abathengisi bakwaButik ukuba bakhe unxibelelwano lomntu kunye necandelo ngalinye lomthengi kwaye ababonise imiyalezo eyahlukeneyo yentengiso.
Sebenzisa i-End-to-End Analytics ukufumanisa ubuqhetseba kwiNtengiso yeNdleko ngeNtsebenzo (CPA)
Imeko. Inkampani isebenzisa imodeli yexabiso lentsebenzo kwintengiso ye-Intanethi. Ibeka iintengiso kwaye ihlawule amaqonga kuphela ukuba iindwendwe zenza isenzo ekujoliswe kuso njengokundwendwela iwebhusayithi, ukubhalisa, okanye ukuthenga imveliso. Kodwa amaqabane abeka iintengiso ahlala esebenza ngokunyaniseka; kukho ubuqhetseba phakathi kwabo. Rhoqo, aba bakhohlisi bathabathela indawo umthombo wezithuthi ngendlela ebonakala ngathi uthungelwano lwabo lukhokelele kuguquko. Ngaphandle kohlalutyo olukhethekileyo ekuvumela ukuba ulandele onke amanyathelo kwityathanga lokuthengisa kwaye ubone ukuba yeyiphi na imithombo enefuthe kwisiphumo, phantse akunakwenzeka ukuba ububone ubuqhetseba.
Raiffeisen Bank yayinemicimbi yobuqhetseba bokuthengisa. Abathengisi babo baqaphele ukuba iindleko zendlela yokuhamba kunye nayo inyukile ngelixa ingeniso ihleli injalo, ke ngoko bagqibe kwelokuba bajonge ngononophelo umsebenzi wamaqabane.
Inqaku. Khangela ubuqhetseba usebenzisa i-end-to-end analytics. Landa umkhondo wenyathelo ngalinye kwikhonkco lokuthengisa kwaye uqonde ukuba yeyiphi imithombo echaphazela isenzo somthengi ekujoliswe kuso.
Isisombululo esisebenzayo. Ukujonga umsebenzi wamaqabane abo, abathengisi kwiRaiffeisen Bank baqokelela idatha eluhlaza yezenzo zomsebenzisi kwindawo: ulwazi olupheleleyo, olungafakwanga, kunye nolungaxilongwanga. Phakathi kwabo bonke abathengi abanesitishi sokudibana samva nje, bakhethe abo banekhefu elifutshane ngokungaqhelekanga phakathi kweeseshoni. Bafumanise ukuba ngexesha lekhefu, umthombo wezithuthi utshintshiwe.
Ngenxa yoko, abahlalutyi bakaRaiffeisen bafumene amaqabane aliqela abela ukugcwala kwamanye amazwe kwaye ayithengisa kwakhona ebhankini. Ke bayekile ukusebenzisana nala maqabane kwaye bayeka ukuchitha uhlahlo-lwabiwo mali.
Siye saqaqambisa eyona mingeni iqhelekileyo yokuthengisa enokuthi isonjululwe yinkqubo yokuhlaziya isiphelo. Ukuziqhelanisa, ngoncedo lwedatha edityanisiweyo kwizenzo zomsebenzisi kokubini kwiwebhusayithi nakwintanethi, ulwazi oluvela kwiinkqubo zentengiso, kunye nedatha yokulandela umkhondo, unokufumana iimpendulo kwimibuzo emininzi malunga nokuba ungayiphucula njani ishishini lakho.
tags: imbekoindleko ngesenzo ngasinyeugqirha ryadomUkuphela kokuphelauhlalutyo lokugqibelauwox bi